Koorsada waad qeybtan heli doontaa aqoon ku sabsan taariikhda Swiidhan, dhaqanka iyo nidaamka. Sidee ayaa horumarka Swiidhan u eekaa iyo sida ay hay’adahayagu u soo koreen? Waxaad wax ka baran doontaa waxyaalaha qiimeynta mudan ee ay bulshada Swiidhishku ku dhisan tahay iyo sidoo kale sida ay dawladad iyo kamuunku meesha ad degan tahay u shaqeeyaan.
• Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato taariikhda Swiidhan?
• Sidee ayay u shaqeysaa hay’ada socdaalku, hay’adaha cashuuruhu iyo hay’adaha kale ee dawladu?
• Waxyaalahee qiimeynta mudan ayay ku dhisan tahay bulshada Swiishidhku?
• Miyaan haysan karaa dhaqankeyga?